Fanamboarana fantson-damba sy mpaninjara fantsom-pifandraisana - Fitaovan'ny China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Hydraulic Accessories > Fitrandrahana hosina > Fiatrehana ny fantsom-pantsona
Product Introduction of Fit Shift Fit
Fiatrehana fantsom-batana fanodinana: 1. Vita amin'ny 45 # carbon steel. 2. Zinc plated or white. 3.Scope: ny habe lehibe. 4. Asao ny vokatra rehetra dia 100% inspectioin alohan'ny entana. 5. Fandefasana mora foana. 6. Fanofanana mpanjifa. 7. Sifotra tsara, fahamoram-po, tsy misy bobaka sy fotsy. 8. Ireo karazana samihafa dia mihatra amin'ny hosoka isan-karazany. 9. Ny karoka maimaimpoana dia afaka mahazo fankatoavana.
Product Parameter amin'ny fametahana fantsom-pamokarana
Karbon vy, vy tsy misy tanany
Zinc plated yellow or white
Sakafo 3.plastic 2.wooden 3. box 4. araka ny fangatahanao.
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiharana ny fametahana fantsom-baravarana
Product Details momba ny fanamoriana ny fantsom-baravarana
1. Kitapo plastika
2. Vata hazo
4. Araka ny fangatahanao.
Hot Tags: Fiatrehana fantsom-barotra, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita amin'ny China, Wholesale, Buy, Customized, An-tsompitra, Miantsena, Price, Vidy, Teny fohy, High Quality